Nagorno-Karabakh:- Azerbaijan Ma Waxay Isku Diyaarineysaa Inay Dagaal Kale La Gasho Armenia ? | Gaaroodi News
Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo xaaskiisa Mihriban Aliyeva ayaa marar badan booqday dhulka dib loo qabsaday
10-kii bishii November ee sanadkii 2020 ayuu dhammaaday Dagaalkii Labaad ee dhex maray waddamada Azerbaijan iyo Armenia. Tan iyo xilligaas madaxweynaha Azerbaijan, Ilham Aliyev iyo xaaskiisa Mihiriban Aliyeva, waxay marar badan booqasho ku tageen dhulka ay dib u qabsadeen ciidamadooda.
Khasaare aan la cayimin oo aad u xooggan ayaa ka dhashay dagaalka labada waddan ku dhex maray xadka lagu muransan yahay ee gobolka Nagorno-Karabakh, wxayna militariga labada dhinac hub aad u culus isu adeegsanayeen muddo 44 maalmood ah.
Intii uu dagaalkaas socday, Azerbaijan waxay dib ula wareegtay dhammaan dhulka ay milkiyaddiisa sheeganeysay ee ku dhow gobolka Nagorno-Karabakh, halkaasoo ay Armenia maamuleysay tan iyo horaantii 1990-meeyadii.
Dowladda Ruushka ayaa labada dhinac dhex dhigtay heshiis, waxaana la isku afgartay in ciidamo nabad ilaalij ah oo ka socda Ruushka ay Nagorno-Karabakh ku sugnaadaan muddo shan sano ah oo soo socota. Sidoo kale waxaa heshiiska qeyb ka ah in dadka reer Armenia ay ku sii noolaadan dhulkaas dib loo qabsaday. Dagaal kharaar ayaa ciidamada Azerbaijan iyo Armenia ku dhex maray gobolka Nagorno-Karabakh
Inkastoo madaxweynaha Azerbaijan, Ilham Aliyev uu ku dhawaaqay in dagaalka uu soo afjarmay heshiiskaas kaddib, haddana dadka u kuur gala xaaladaha gobolkaas ayaa sheegay in colaaddu aan wali laga gaarin xal, ayna suuragal tahay in dagaal kale uu qarxo.
Maxaa keenay cabsida laga qabo dagaal kale?
Waxaa lasoo tebiyay in gudaha dalka Armenia uu kasii xoogeysanayo dalabka ku aaddan in lagu dhaqaaqo aargoosi, maadaama dhankooda looga gacan sarreeyay dagaalkii dhacay dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay.
Sidaas awgeed Azerbaijan ayaa billowday in ay xoogeyso militarigeeda, waxayna diyaarineysaa istiraatiijiyad cusub oo ku aaddan dagaal kale.
Dagaalkii gobolka Nagorno-Karabakh ayaa burbur xoog leh u geystay magaalada , halkaasoo ay ku dhacayeen madaafiicda la isu adeegsanayay
Dowladda Azerbaijan ayaa ka cabsi qabta suurtagalnimada “in dowlad aargoosi raadineysa” ay qabsato xukunka dalka Armenia, marka lasoo afjaro xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan waddankaas.
Shir jaraa’id oo uu madaxweyne Aliyev u qabtay warfidiyeenka ayuu ku yidhi: “Dadka u xusul duubaya siyaasadda waddanka Armenia waa in ay xisaabta ku darsadaan in isku day walba oo aargoosi ah ay kala kulmi doonaan ciqaab weyn oo uga timaada dhinaca Azerbaijan.”
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaaraha Armenia, Nikola Paşinyan, ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay in Azerbaijan ay gacan xoog leh ka heleyo Turkiga.
Hase yeeshee, hoggaamiyeyaasha mucaaradka Armenia ayaa afkooda ka ilaaliya hadallo u muuqan kara in ay damacsan yihiin dagaal ay la galaan Azerbaijan.
Turkiga iyo Azerbaijan ayaa isbahaysi ku ah dhinaca dhaqdhaqaaqyada militariga iyo qorsheynta, waxayna saaxiib ahaayeen tan iyo markii ay heshiis wadashaqeyn ah kala saxiixdeen sanadkii 2010-kii. Ciidamada labada dal ayaa si joogto ah u sameeya dhoollatus militari.
Wararka kale oo ay warbaahinta isla dhex marayaan ayaa sheegaya in xukuumadda Baku ee uu hoggaamiyo madaxweyne Ilham Aliyev ay walaac ka qabto in Ruushka uu isku dayayo dib u dhisitaanka ciidamadii Armenia ee lagu jabiyay dagaalka.
Khudbad uu Aliyev jeediyay 25-kii bishii February ayuu ku yidhi: “Militariga Armenia way burbureen. Waxba kama soo harin, mana dhici karto in ay mar kale dhaqdhaqaaq ka sameeyaan halkaas. Ma oggolaan doonno in ay mar kale halis na galiyaan.”
Laakiin Jalal Harutyunyan, oo ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga maamulka gobolka Nagorno-Karabakh, sidoo kalena ahaa madaxa howl-gallada militariga ee Wasaaradda Difaaca Armenia, ayaa 5-tii bishii February sheegay in Armenia ay ku khasban tahay inay dib usoo ceshato dhulkii looga qabsaday dagaalkii sanadkii hore